I-Georeferencing i-dwg / dgn imephu - I-Geofumed
Matshi, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Siza kusebenzisa lo mzobo ukucacisa ukungathandabuzeki endleleni malunga nendlela yokwazisa ngayo imephu kwiCAD.
Siza kusebenzisa umzekelo eyakhelwe ngaphambili, apho sakha i-UTM ifowuni ye-16 kummandla wasentla ukusuka kwiphepha eligqithisiweyo kwaye wakha nge-AutoCAD.
Le ngxaki ebalulekileyo xa isebenza kunye nesixhobo esiqhelekileyo seCAD. Kwimeko ye-AutoCAD, iiyunithi zomsebenzi ziyinkimbinkimbi ukuphatha abantu abafayo kuphela, kuba xa kufakwe okokuqala ngqa kwaye yenziwa, ibuza: Ngaba uyi-gringo? ... Ewe, akusiyo into eluhlaza kodwa ubuze ukuba uza kusebenzisa iiyunithi kwimilimitha okanye intshi.
Ingongoma kukuba amazwe kokufika lethu le yunithi imitha, ukuze thina sibe ngenjongo izicwangciso zokwakha yehlabathi enzima na ebalulekileyo (yunithi iiyunithi) ... ezinye zochuku xa kulayishwa iibhloko okanye iindlela Umgca ufuna ukuhlaziywa kwakhona. Nangona iinguqulelo zakutshanje AutoCAD uncedo nale ngxaki, iifayile ezenziwe iinguqulelo ezidlulileyo kuhlala ingxaki ye iiyunithi xa ufuna georeference.
Kwimeko yeMicrostation, leyo elungiselelwe kwi «iiyunithi zokusebenza»Kodwa ziyaqhubeka nokuba ziifayile ze-cad ngaphandle kokuchazwa kwejog. Unolawulo olungcono koko iMicrostation iyamkelayo njengefayile yembewu (ifayile yefayile), Apho bonke abo sisimo zixeliweyo ... ukuba nangona umntu aqonde uncedo lukhulu ukuqalisa templates AutoCAD ukuya Anglo-Saxon.
Khumbula ukuba ukuba usebenza nee-UTM ulungelelwaniso, kwaye imephu "ilungiselelwe oko" kwenye yezo nxibelelaniso, into onayo ifayile ekubhekiswa kuyo kwigridi, kodwa okwangoku ayinalo ulungiselelo okanye iDatum eyile nto uyiyo yaziwa ngokuba yi-georeference okanye isalathiso esipheleleyo.
Kwimeko yam, "ukungabi nzima" kunye neeyunithi ze-AutoCAD, into endiyenzayo kukuvula imephu yelizwe lam kwiMicrostation, endiyaziyo ukuba ifakwe kumlinganiso, ndibiza ifayile ye-AutoCAD njengesalathiso (kuba ayifuni kungeniswa) kwaye ukhethe iqhosha «Iinketho zeDWG» apho ndicacisa ukuba iiyunithi zomsebenzi zikhona «Icandelo leefayile zembewu», ingakumbi «Indlela yokuncamathisela» vumela ukuba «UMhlaba oHlangeneyo». Kwaye nilungile, kungakhathaliseki ukuba dwg wayesebenza iimillimitha okanye intshi, ifayile iyakuqonda iiyunithi umsebenzi imaphu yam DGN, ngoku khuphela i reference imephu ukuya kwifayile wam, ndinifake phantsi elinye igama, ngaloo ndlela ndiyazi ukuba Imephu ineempawu zefayili yam imbewu.
... kulungile, yinkxalabo yam kodwa isebenza ... unokufumana ukuphikisa kwakho 🙂
2 Yenza iprojection
Oku kulandelayo kulula, unokwenza okuninzi asibonise, nangona ukuba unesiphelo esikolweni sakho esilungela i-$ 1,500 ungayenza nayo ArcGIS :), njengaye Map3D, Microstation Geographics, Cadcorp...
Ukuyenza ngeManifold udala ifayile entsha, emva koko ungenise ifayile yeCAD «ifayile / ukungenisa / ukudweba«, Ukhetha ukhetho lwefayile« dgn ». Ikubuza ukuba ukhethe ukhetho lweendidi zejika, apho usamkela ixabiso eliza kuza ngokungagqibeki.
Ke ifayile engeniswayo, ndicima inqaku kunye nemigca emibini engasazi isizathu sokuba zenziwe. Yile nto uyenzayo «chukumisa kwaye ususe«... Uyadlala emva koko ucime ngesitshixo se« cima »
Ukwabela ingqikelelo, khetha icandelo, iqhosha lemouse lasekunene kwaye ukhethe «yabela ingqikelelo»
Khumbula ukuba awukwazi ukukhetha "ukutshintsha ingqikelelo" kuba yifayile ye-cad, engazisi ulandelelo.
Kwimeko yam ndiza kukhetha «i-Universal Traverso Mercator», iZone 16 yeNyakatho yeHlabathi kunye neWGS84 njenge-Datum.
3 Thumela kwiGoogle Earth.
Le yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukuba imephu ilungelelaniswe kakuhle, ndiza kuyithumela kwelinye ilizwe kml (akuyomfuneko ukubonelela ulungelelwaniso lwendawo). Cofa ekunene kwecandelo esele likhethwe kulo kwaye ukhethe ukhetho "lokuthumela ngaphandle", ukhethe ifomathi ye-kml.
Ukwenza imimandla eyahlukileyo, ukopisha kuphela icandelo (ngaphandle kokuba ne-georeferential), ke unamathisele, unamathisele, unamathisele, unamathisele, unamathisele, unamathisele, unamathisele, unamathisele ... uze unike imida eyahlukeneyo kwicandelo ngalinye elidaliweyo. (I-Component in Manifold ilingana nocingo)
Emva koko uvula iifayile ze-kml ngeGoogle Earth, utshintshe ubukhulu nombala womgca ... kwaye apho unemihlaba esuka eMexico ukuya eVenezuela nakwaseSpain.
Ukusuka apha ungalanda iifayile zalolu hlobo kwiifom.Dwg,.Dgn V7,.imephu ezininzi kunye.KML kunye neendawo ze-utm ezisenyakatho kumazwe aseSpeyin, kuquka ezi zintathu ezisetyenziswa eSpain
... zonke ezithathwe kwifayile elula yakhiwe nge Excel.
Dgn Dwg Umhlaba ka-Google KML GIS asibonise
Post edlulileyo«Edlulileyo Kuphi ukufumana imephu yeHonduras
Post Next Musa ukwenza nge-CAD malunga neenkqubo ze-GISOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi-"Georeferencing i-dwg / dgn map"
Othandekayo malunga nesihloko, ndinokungabaza kwaye ngxaki yokuyicombulula.
Ingaba q babe nefayili Cad DWG, nto leyo eli phondo esemantla Ecuador, wathi mapita parce kuba kummandla 18N Wgs84 ongqinisisa zilungelelanise zamanqaku ezithile ezithathwe kwi-Google Earth, imephu ke yokumilisela na kwimimandla 17 and 18 kwaye emantla kunye ikhweyitha emazantsi, kukho ingxaki mna indawo data (yepholigoni) kunye nefomathi imilo kunye nokunyuka ngokwezelizwe Wgs84 leyo ebonisa kum yonke ngokuchanekileyo iinkqubo ezisebenzisa kwelivi, kodwa xa kumazwe DWG le boot me kude ekubeni ukuba xa echaza uququzelelo zangaphambili kule ndawo 18 emantla utm i ikona ejongene kumntla ikhweyitha kum ukuyiqala kwaye uququzelelo ungenguye Mimas kunye ezivavanyiweyo uqikelelo ezahlukeneyo kodwa akukho namnye unika mna kodwa wagxininisa njengoko uqondisa control Ndabagqala iinkqubo eziliqela q ibonisa moya kuthelekelelwe AutoCAD zone kumantla 18 wgs84.
enoba yiyiphi into engingayifumangayo okanye indlela endifanele ukuyiphatha ngayo le ngxaki.
Ndiyabulela kwangaphambili impendulo.
Unyanisile, sendiyilungisile ingxaki. Jonga ukuba ungazikhuphela na
Xa ucofa kwiikhonkco, isikrini seCanel sibonakala sibeka igama kunye nephasiwedi kwaye iifayile azikhangeli ...